Cameron.....: ပဲကြာဇံမုန်ညင်းချဉ်ကြော် နဲ့ ပဲကြာဇံသီးရွက်စုံသုပ်.....
ပဲကြာဇံမုန်ညင်းချဉ်ကြော် နဲ့ ပဲကြာဇံသီးရွက်စုံသုပ်.....
အမှန်တကယ်တော့ အဲနေ့က အမေမရှိလို့ဘာဟင်းမှမချက်တာနဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲက ရှိတာလေးထုပ်ပြီး ဟိုရောဒီမွှေနဲ့အစမ်းထွင်ကြော်ထားတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ပါ...။ မုန်ညှင်းချဉ်က တာချီလိတ်က အဒေါ်အငယ်ပို့ပေးထားတာ...။ ဟင်းချက်တဲ့မုန့်ညှင်းချဉ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ...။ ထမင်းကြော်နဲ့စားဖို့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့တွဲစားလို့ကောင်းတဲ့ မယ်ဆိုင်ဖက်ကလုပ်တဲ့ ချိုချဉ်ငံစပ်မုန်ညှင်းချဉ်လေးပါ ...။ ၀က်သားကြိတ်သားကလဲရှိနေတော့ မုန်ညှင်းချဉ်နဲ့ကြော်စားဖို့အိုင်ဒီယာရသွားတယ်...။ ခါတိုင်းလိုရိုးစင်းတဲ့ မုန်ညှင်းချဉ်ကြော်မျိုးမလုပ်ဘဲ တခြားဘာထည့်လို့ရမလဲလို့ ကြောင်အ်ိမ်ထဲရှာကြည့်တော့ ပဲကြာဇံတစ်ထုပ်တွေ့တယ်။ ကြာဇံနဲ့ရောကြော်ဖို့သတိရသွားစေတာကတော့ တရုတ်နှစ်ကူးတွေမှာ နောက်ဆုံးလက်ကျန်ဟင်းတွေကိုအကုန်ရောပေါင်းလိုက်တဲ့ ဟင်းပေါင်းကိုပါပဲ...။ ဟင်းပေါင်းကိုစားဖူးသူတိုင်း သိကြမှာပါ...။ အသားမျိုးစုံရဲ့အချိုအရသာ ကျန်မဆိုင်ရဲ့အချဉ်အရသာနဲ့ တည်ပါများလို့ကျသွားတဲ့အရည်ရဲ့အငံဓါတ်ကိုထိန်းဖို့ ပဲကြာဇံလေးထည့်လိုက်တာမျိုးကိုးး...။ ခုကြော်မယ့် မုန်ညှင်းချဉ်ကတော့ အဲဒီဟင်းပေါင်းအရသာနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူလိမ့်မယ်...။ လိုအပ်တဲ့ အမယ်တွေကို အောက်မှာရေးပြထားပါတယ်...။
ကြက်/၀က်သား ကြိတ်သား 200g(ပြောင်းမှုန့် 1tsp ဆားနဲ့ ငရုတ်ကောင်းနယ်ထား)
ဆီဟင်းခတ်ဇွန်းကြီးတစ်ဇွန်းအပူပေးပြီး ကြက်သွန်ဖြူ နီ ဂျင်းကိုဆီသတ်ပါ...။ ရွှေဝါရောင်သန်းလာရင် ဆားထည့် ကြက်သားထည့်ကြော်ပါ...။ အသားကိုရေခြောက်ပြီဆို ဥနီနဲ့မုန်ညှင်းချဉ်ထည့်ကြော်ပါ...။ သုံးမိနစ်လောက်မွှေပေးပြီး ပဲကြာဇံထည့်ကြော်... ကြက်သားမှုန့် ပဲငံပြာရည်အကြည့်ထည့် ..ကြာဇံနူးမှ ကြက်ဥကိုနဲနဲမွှေပြီးလောင်းထည့် ချက်ချင်းအမွှေသေးဘဲ စက္ကန်နှစ်ဆယ်လောက်မှာ အသာမွှေပေးပါ....။ ကြက်ဥနံ့မွှေးဆိမ့်တဲ့အရသာနဲ့ မုန်ညှင်းချဉ်အရသာရောသွားတော့ စားလို့အလွန်တရာကောင်းသော ပုံမှန်ကြော်နေကျ မုန်ညှင်းချဉ်ကြော်နဲ့တူသော ဟင်းတစ်ပွဲကိုရပါပြီရှင်...။
အဟဲ...ဒီဟင်းပွဲလေးလဲ ဘာဟင်းမှမရှိလို့ အိမ်မှာရှိတဲ့အရွက်ကလေးသုပ်စားဖြစ်တဲ့နေ့က ဟင်းပွဲလေးပါပဲ...။ အခါတိုင်းလို့ ဟင်းမရှိရင် ကြက်ဥကြော်စားမယ် ဒါတွေကရိုးနေပြီလေ ...။ ဆိုတော့ စားလို့လဲမြိန် ကြက်ဥလဲပါ ဟင်းရွက်တွေလည်းပါ ချဉ်ငံစပ်လေးတစ်ပွဲနဲ့တင် ကျန်တာဘာဟင်းမှ မလိုတော့ဘူး ပြီးတော့ ညဖက် ထမင်းမစားဘဲ ၀ိတ်လျှော့နေသူတွေ အတွက်လည်း တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ ဟင်းပွဲလေးပါ...။
ကြက်ဥကလွဲလို့ ကျန်တာအားလုံးကို ဇလုံတစ်ခုထဲထည့်ပြီး ခတ်ဖွဖွနယ်ပေးပါ...။ စားပွဲပန်းကန်ထဲထည့်ပြီးရင် ကြက်ဥကိုအစိပ်ကလေးတွေစိပ်ပြီးအလှဆင်ပါ...။ လွယ်လွယ်လေးပဲ လုပ်စားကြည့်ပါ ဒီတိုင်း သဘောင်္သီးသုပ်တို့လို အသုပ်သဘောမျိုးနဲ့ အခါးရည်ပူပူလေးနဲ့ တွဲစားလဲသိပ်ကောင်းပါတယ်...။
Posted by coral nyo at 01:34
Labels: simply coral's kitchen(အသုပ်များ)
6 February 2013 at 02:13
ဂလု ဂလု ...ပုံတွေကြည့်ရင်း....သက်ပျင်းချမိသည်
6 February 2013 at 22:42
Aung Htut said...
7 February 2013 at 08:31
မမမိုးငွေ့က တော်တော်စိတ်ရှည်တာပဲ... စားချင်စဖွယ် လုပ်တတ်တယ် :D
7 February 2013 at 13:24
စားတာပိုကျွမ်းတယ်မကြီးရေ .. :P
9 February 2013 at 07:24
“ One smile, can startafriendship. One word, can endafight. One look, can savearelationship. One person can change your life ”
အဖိုးနဲ့အဖွားအကြောင်းကို အစက တစ်ယောက်ချင်းတစ်ပို့စ်ဆီရေးမလို့ စဉ်းစားထားတာ ..။ ဒါပေမယ့် အဖိုးအကြောင်းရေးရင် အဖွားအကြောင်းပါရေးရမယ့်အတ...
တိမ်တွေမီးခိုးရောင်သန်းတဲ့ စနေနေ့….. သူက ကျွန်မကို ကလေးလေးတဲ့….။ ကျွန်မကသူ့ကို ကိုကိုလို့ခေါ်တယ်…။ တကယ်တမ်းက ကျွန်မထက်သူ နှစ်...
ဒီ “မိုး”ဆိုတဲ့ သီချင်းက “ဆယ့်နှစ်ရာသီအချစ်” စီးရီးထဲက ကျော်သူစိုးနဲ့ အာဇာနည်တို့ ပြန်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ..။ ကျွန်မနေ့စဉ် နားထောင...
မမမွေးပြီးလျှင် ပြီးချင်း မေမေသေဆုံးသွားသည်ဟု ပြောပါသည်..။ မမကိုမွေးသည့်အချိန်၌ အမေ့အသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီဟု ပြောသည်..။ အမေ၏ သမီးအကြီးဆုံး မမြ...
ကျွန်မ မျက်နှာပေါ်မှာ မိုးရေတွေနဲ့မျက်ရည်ပူတွေ ရောယှက်လို့ ..။ မိုးစက်မိုးပေါက်တွေလာရာ မိုးကောင်းကင်ကို မျက်နှာမူထားလို့လား... ကျွန...
နီနီရဲ့“မာရီယို” အယ်လ်ဘမ်ထဲက “မိုးစက်လေး” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကလည်း မိုးရွာချိန်မှာ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးနဲ့ နားထောင်လို့ကောင်းမယ့် အသဲကွဲသီ...
ရုံးက အော်ဒါမှာလို့ ထောင်းလာပေးတာ... FOC မှိုထောင်းလေးကို ရုံးကညီမလေးတွေက ကြိုက်လွန်းလို့ ခဏခဏထောင်းရပါတယ်... 2018 ပို့စ်အဖွ...
“ဟေးးး.... မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသော မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ...စု...” သူမတို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းသံက တိုက်ခန်းကျဉ်းကလေးကေ...
အပြင်မှာ ကောင်းကင်ကခဲသားရောင် အုပ်မှိုင်းလို့ ရာသီဥတုက အေးစိမ့်စိမ့်...။ ဒီနေ့ ကျွန်မအနီရောင်အပေါ်ဝတ် အနွေးထည်ပါးပါးဝတ်ခဲ့တယ်...။ နှု...
Blog Day အမှတ်တရ....
Aug 31 မှာကျရောက်မယ့် blog day အတွက် အမှတ်တရလေးရေးပေးဖို့ ကြောင်ကလေး မောင်မျိုး က တဂ်လိုက်ပါတယ်...။ ဒီလောကထဲ ကိုယ်ရောက်လာတာ လာမယ့် ဒ...
“မောင်...နည်းနည်းပိန်သွားတယ်နော်..” သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့သမျှကာလပတ်လုံး တစ်ခါမှမသုံးစွဲဖူးခဲ့တဲ့ “မောင်”ဆိုတဲ့နာမ်စားကို သုံးမိသွားခဲ့...
“ ကျွန်တော်.....ခင်ဗျားကို ချစ်တယ်...” (မီနှင့်သူ၏ကိုကို)
My Super Chef
Broccoli, Zucchini, Cabbage Quinoa Salad
ငွေစန္ဒာ (၄) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်
Myanmar needs International aid urgently. Please help!
'' အလွယ်ချက် အုန်းထောပတ်ထမင်း "
ဂျပန်ပြည်မှပါးသောစာလွှာ . . .
Tiger Khin Sein
ကိုကြီးကို အတွက် အကြော်စုံ
Kind to Earth
This Post Doesn't HaveaTitle on It
ဖတ်ပြီးတဲ့ စာအုပ်တွေ ... ၂
သမီးလေး ဆီ မှ သင်ယူခြင်း
Rumduol လေးတွေ ပွင့်ချိန်တန်
ဆန်းဆန်းတင့် (၁) ၊ ကြွက်ကလေးနဲ့ ကိုယ်
ကမ်းခြေ ကမ်းခြေ 🎵🎵
Moment of cutting the last tie
My Paradise - Flowers In A Heaven
ဗိုက်အဆီကျဖို့ ရိုးရှင်းသော လေ့ကျင့်ခန်းများ
ဇီဇဝါပင်လေး ပြောပြတဲ့ မောင့်အကြောင်း ပုံပြင်
simply coral's kitchen (12)
simply coral's kitchen (baking) (9)
simply coral's kitchen (cake) (3)
simply coral's kitchen (coffee) (3)
simply coral's kitchen (ငါးပိကြော်များ) (1)
simply coral's kitchen (ငါးဟင်းလျာ) (7)
simply coral's kitchen (ပုစွန်ဟင်းလျာ) (7)
simply coral's kitchen (ရှမ်းစာများ) (12)
simply coral's kitchen (သက်သတ်လွတ်ဟင်း) (12)
simply coral's kitchen (အသီးအရွက်များ) (11)
simply coral's kitchen (ခေါက်ဆွဲနှင့် ပါစတာများ) (17)
simply coral's kitchen(၀က်သားဟင်း) (13)
simply coral's kitchen(စားဖြစ်သော မနက်စာများ) (11)
simply coral's kitchen(ကြက်သားဟင်း) (12)
simply coral's kitchen(သရေစာများ) (25)
simply coral's kitchen(အချိုပွဲများ) (11)
simply coral's kitchen(အသုပ်များ) (18)
ပုံရိပ်များ အခင်းအကျင်း (41)
သွားမယ် စားမယ် (21)
ပဲကြာဇံမုန်ညင်းချဉ်ကြော် နဲ့ ပဲကြာဇံသီးရွက်စုံသုပ်...